Arsenal oo loo sheegay inay bixiso 60 milyan oo ginni | Radio Himilo
Home / Uncategorized / Arsenal oo loo sheegay inay bixiso 60 milyan oo ginni
Posted by: Ahmed Haaddi May 31, 2021
Himilo – Arsenal ayaa loo sheegay inay bixiso € 60m (£ 51.6m) haddii ay rabto inay si joogto ah ula saxiixato Martin Odegaard oo ka tirsan Real Madrid.
Kubadsameeyaha reer Norway ayaa ku riyaaqay amaah guul uu ku qaatay Emirates Stadium qeybtii labaad ee xilli ciyaareedkii 2020-21, isagoo dhaliyay labo gool iyo labo caawin tartamada oo dhan.
Dadaalkii Odegaard kuma filneyn inuu arko Gunners oo gaarta kubbadda cagta Yurub, laakiin wuxuu caddeeyay inuu ku faraxsan yahay Waqooyiga London madaama Arsenal ujeedkeedu yahay inuu si joogto ah ugu sii jiro buugaagta.
Sida laga soo xigtay Defensa Central, Real Madrid ayaa diyaar u ah inay u ogolaato Odegaard inuu ku baxo qiimaha saxda ah xagaagan, iyadoo lacag ku dhow 52 milyan ginni ay ku xirnaan karto heshiiska Arsenal.
Warbixinta ayaa intaa ku dareysa in Los Blancos ay weli ku qanacsan tahay in Odegaard uu fulin doono kartidiisa, laakiin kooxda ayaa ka niyad jabtay habdhaqankiisa bishii Janaayo, iyo baahida loo qabo in lacag loo ururiyo ganacsigooda u gaarka ah ee suuqa kala iibsiga oo Real ku soo jiidi kara iib.
Odegaard ayaa kaliya 11 kulan u saftay Real Madrid tartamada oo dhan ilaa iyo haatan – marka la barbardhigo 20 kulan oo uu muddo gaaban kula qaatay Arsenal – waxaana uu kabtan u noqon doonaa xulka Norway xagaagan tartanka Euro 2020.
Previous: Maqal- Suwar min xayaati saxaabah- Casharka 95aad
Next: Maalinta Caalamiga ah ee diididda Tubaakada